Ardayda Jaamacadda Bariga Afrika, faraca Galkacyo, oo Galaya Imtixaankii Xillilaha. – Radio Daljir
Galkacyo, 29 -Ardayda Jaamacadda Bariga Afrika, laanta Gaalkacyo ayaa maanata u fariistay imtixaanka teeramka labaad ee sannad dugsiyeeka 2010/11-ka. Ardayda imtixaanka gashay ayaa gaaraysa 165 Arday kuwaas oo ka tirsan afar kulliyadood oo kala ah kulliyadda maamulka iyo maaraynta, culuumta computerka, shareecada iyo daraasaadka islaamiga ah iyo tan mac-hadka sare ee caafimaadka, gaar ahaan qaybta nursingka ama barashada kalkaaliyenimada caafimaadka.
Maamulaha Jaamacadda Bariga Africa laanta Gaalkacyo Mudane Adam Maxamed Cigaal ayaa saxaafadda kula hadlay xarunta Jaamacadda ee magaalada Gaalkacyo isaga oo tafaasiil dheeraad ah ka baxiyay hab-sami u socodka howlaha imtixaanaadka. Mudane Cigaal waxa uu sheegay in imtixaanku socon doono 10 maalmood kulliyaduhuna ay lababa galin gali doonaan imtixaanka.
Ardayda ayaa iyaguna dareenkooda ku aaddan imtixaankan u cabbiray saxaafadda iyaga oo muujiyay in ay qabaan rajo aad u saraysa. Xarumaha kale ee Jaamacadda Bariga Afrika ee Garowe iyo Bosaaso ayaa iyaguna sidoo kale dhawaan bilaabay imtixaannada xillilaha ah ee kulliyadaha kala duwan ee Jaamacadda.
Jaamacadda Bariga Afrika waxa ay ka mid tahay laba jaamacadood oo ku yaalla Puntland iyada oo tankalena ay tahay Puntland State University. Labadan Jaamcadood ayaa waxa sannad walba gala ardayda ka soo qalin-jabisa dugsiyada sare ee Puntland inkasta oo ayan daboolin baahida loo qabo tacliinta sare ee dalka. Ka sokoow Jaamacadaha ayaa waxa iyaguna jira macaahid kala duwan oo lagu barto culuumta kala gaddisan, kuwaasoo dhammaantood ah kuwo gaar loo leeyahay.
Cumar Axmed Maxamed ?Af-guduud?